Acids & Corrosives Kuzadza Machine - Micvd.com
NPACK inopa huwandu hwakazara hwemidziyo yekuzadza zvigadzirwa zvinotyisa kuti zvisangane chero chishandiso. Yakagadzirwa kubva kuHDPE (yakakwirira density polyethylene, iyi michina yekuzadza, inotakurisa uye turntable yakagadzirirwa kubata kurangwa kwenzvimbo inonyanya kukanganisa iyo masimbi esiteti anowanzoita kunyungudika.
NPACK poly yekuzadza masisitimu anoshandisa nzira dzekuzadza volumetric, idzo dzakanyanya kuita uye zvinoshanda. Iwo mafirita akagadzirirwa kuzadza kubva pane chidimbu cheefa kusvika pamarita mashanu uye anokwanisa kubata viscosities kubva kubva kuonda uye kupusa kune akanyanya gogo zvinwiwa. NPACK'modular design inogona kubvumira kugadzirwa kwemafirita emuchina kuti ave nematangi akawanda uye anozadza misoro yemusoro kuti isarure zvinhu zvisingaenderane mukati meimwe ficha. Zvese NPACK mafirita akavakwa kuti ape iyo yakanakisa kusangana kwehuwandu hwakawanda kugona, nyore kumisikidza uye changeover, uye shoma pasi-nguva yekugadzirisa uye kuchenesa. NPACK zvakare inogadzira iyi mhando yemidziyo yekushandisa muhombodo yematafura-yepamusoro manyorero.
Iwo poly anotakurisa uye maTurntables kusimudzira kwemusikirwo kubva kune poly filler uye airatidza kuve akakosha zvinhu kune avo vanopeta zvigadzirwa zvinogadzira.
Acids & Corrosive Bottling Equipment Zvishandiso:
Mvura-yakatetepa uye inopupuka zvinwiwa zvinwiwa
Medium viscosity inokanganisa zvinwiwa
Acids yakadai sehydrochloric acid
Mabhesi akadai sodium hypochlorite
Maitiro Ekuzadza Machines Nhamba:
HDPE (yakakwirira density polyethylene inozadza masisitimu furemu kuvaka
HDPE dhizaina ine poly float system
Kynar kana Teflon zadza mavharuvhu
Yakagadzirirwa PVC thubhu uye polypropylene fittings
Tabletop, semi-otomatiki uye yakazara otomatiki yekuzadza michina inowanikwa
Inesarudzo yekuvhara kwemhepo inochengetedza uye yakachengeteka inogona kuvezwa kunze kweHDPE
HDPE uye PVC kuvakwa, Stainless simbi Hardware
Inorwisa kupikisa HDPE belting
Anomhanyisa mota mota
HDPE njanji system ine chishandiso-shoma shanduko
Clockwise kana counter wachi kutenderera kutenderera
NPACK Bottling Equipment Adhiri
Midziyo yedu yemabhotoro inoisa mukuvakwa kwakasimba kubva kuHDPE, UHMW, uye PVC kuvakwa uko kunobata nzvimbo dzinotyisa.
Yese nyore kuchenesa NPACKMishini yekuzadza mimhanzi inogadzirwa uye yakavakirwa kuti ibvumidze "kukurumidza kuburitsa" iyo inokwirisa kuchenesa kwavo.
Kuchinja-chinja, kuita zvinhu zvakasiyana-siyana uye kuita zvinhu zviri nyore zvinhu zvinokosha pane yega yega maitiro ekuzadza atinogadzira. Izvi zvinobvumidza akawanda zvigadzirwa nemidziyo zvinogona kumhiswa pamushini mumwe une chishandiso-chakaderera changeover. Nokusarudza nzira dzekuzadza dzakakodzera, mhando dzakawanda dzezvigadzirwa dzinogona kuzadzwa.
Zvese zvekushandisa mumabhotoro zvakagadzirirwa yako chaiyo application. Iyo tank tank, huwandu hwekuzadza misoro, zvikamu zvekusangana, uye mafirita zviyero zvese zvinoenderana neako zvaunoda chaizvo.NPACK michina yekuzadza iri nyore, nyore kushandisa, uye inoratidzira nekukurumidza setup & shanduko pamusoro. Vashandisi vanogona kuchengeta nguva yekuzadza se "mabikirwo" ekumisikidza nekukurumidza.
Kubva Kupinda-chikamu chetafura yepamusoro masisitimu kusvika azere otomatiki kumagumo kuti apedze kudzora sisitimu yekuzadza, nyanzvi dzedu dzinoongorora matanho ese ekugadzira, kugadzira uye kuisirwa kwemidziyo yako yemabhawa.
Acid Liquid Kuzadza Machine
Otomatiki acid mvura yekuzadza muchina inogona kushandiswa kuzadza akasiyana-siyana asidhi kana alkaline zvinwiwa senge chimbuzi kuchenesa, kicheni mafuta remover, yekuwachisa machira, ruoko sanitizer, nezvimwewo.
Muchina uyu unotora chinzvimbo chechimiro chinoburitsa mutsara, chinogona kuiswa kumhando dzakasiyana dzemabhodoro
Uyu muchina unotora PLC touch screen control, yakagadzikana kushanda, nyore kugadzirisa. Mushure mokunge zvikamu zvishoma zvatsiviwa uye zvakakodzera magadzirirwo akaitwa, girazi mabhodhoro uye epurasitiki mabhodhoro akakwirira akasiyana uye diameter inogona kuzadzwa nehukuru hwekuita uye hupamhi hwekushandisa.
Muchina uyu unobatanidza Optical, mechanic, Magetsi, gasi mumuchina mumwe. Adopt kuburikidza nekudzora kudzora nguva kusvika rakasiyana vhoriyamu kuzadza Kuzadza nguva kunogona kudzorwa chaizvo kune zana remasekondi. Iyo yekuzadza maitiro inopedzwa pasi peiyo PLC chirongwa chekutora pane yekubata screen. Kuve nekushanda kwakasimba uye kwakavimbika kushanda, kukwirira kwakawanda, kushandurwa, huwandu hwekuzadza chiyero mamiriro hunogona kushandurwa mukati memaminitsi mashoma. Kuzadza vheji kushandisa kunze kwenyika mhando, tekinoroji yepamusoro, hunyanzvi, isiri yekudonha yekuzadza phenomenon.
Schneider PLC uye kugunzva kutonga
Servo motokari Inotengesa, servo imwe motokari imwe piston, yakakurumidza uye yakarurama.
Yakafanira kuzadza vhoriyamu, mukati me±0.2 ye1000ML
Hapana bhodhoro, kwete kuzadza, kamwe chete kunyevera pazvikanganiso
Muromo wemapupa unogona kuwanikwa kana uchida
Corrosive Liquid Kuzadza Machine
Iyi Inoparadza Liquid Kuzadza Mashini ndeye yepamusoro-tech yekuzadza muchina neanti-ngura. Chikamu chakabatwa chemvura Adopt isiri yesimbi zvinhu uye chakakodzera michina. Iyo inokodzera kuzadzwa kwemhando dzakasiyana dzinokanganisa mvura, senge yekuwachisa zvinwiwa, chimbuzi chekuchenesa, sipo, mishonga yekuuraya zvipuka, vitriol, reagent, ect, inoshandiswa zvakanyanya mumakemikari, & mishonga yemishonga ..
1. Dhizaini system - ine Mitsubishi PLC yekudzora system, ichizadza dhata yekukonzeresa tuning
2. Shanduro yekushandisa - yakajeka screen screen, yemunhu-muchina interface iri nyore, yakachengeteka uye yakavimbika.
3. Feature Kuwedzeredza - Kutemwa ne-anti-kudonha mudziyo, inogona kudzika kuzadza nezvinhu. (Iyi ficha inogona kusarudza)
4. Zvigadzirwa zvemagetsi - kushandisa zvigadzirwa zvine mukurumbira pasi rose kuona kuti michina iyi yakavimbika uye yakanyanya kurongeka.
5.Michina michina - iyo mativi makuru anogadzirwa akakwira emhando yePP furemu, yekubatana chikamu chakagadzirwa chisiri-cheputi corrosion silica gel, PTFE hoses, vharuvhu ndeye PVC.
6. Kuwedzeredzwa - kunogona kuve yakagadzirirwa kune chaiyo yekugadziriswa kwezvinodiwa, zvakadai se: zvinhu zvakaiswa chisimbiso, kupisa, kusimbisa sisitimu, nezvimwe ..
7. Kuverengera kuyerwa - chaiyo-nguva yekuverenga, inoratidzira pane yakabuda basa zvakananga.
8. Kuzadza Kuonekwa - Hapana bhodhoro, kana kana bhodhoro rizere nhamba haina kukwana, hapana kuzadza.